Ị nwere ike inye m obere Amazon SEO?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị bido Amazon SEO anyị dị obere iji nweta nghọta zuru ezu nke A9 search algorithm na isi ihe eji chọpụta ọnọdụ ọ bụla dị elu na nchọta ngwaahịa. Ya mere, olee otu o si arụ ọrụ? Emezu n'ozuzu, usoro a dị nnọọ mfe. Nke mbụ, search engine Amazon na-akwalite ọnụ ọgụgụ niile dị mkpa ga-adaba na ụfọdụ isiokwu ọchụchọ ị na-achọ - airplane appraisal cost. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Amazon na-enye gị nnukwu ndepụta nke ngwaahịa ndị e gosipụtara dị ka otu nnukwu katalọgụ. Ọzọ, ọ na-ekpochapụ nsonaazụ ọchụchọ ndị ahụ ma na-ele ha anya dị ka mkpa na n'usoro ka mkpa iji mee ka ihe ọ bụla dabara kpọmkwem maka arịrịọ ọ bụla a chọrọ aha ngwaahịa. Ihe niile yiri ihe doro anya ugbu a, nri? Ya mere, ọ bụ oge iji ọsọ na-agba ọsọ site na Amazon Amazon SEO ma nyochaa isi ihe ndị dị na nkenke.
Quick Amazon SEO Course - A9 Ranking Algorithm
Ma ugbu a ka anyị na-amalite anyị Amazon SEO N'ezie na di na nwunye nke isi iwu na kwesịrị mara site na onye ahịa ọ bụla ere ebe ahụ. M na-ekwu na okwu atọ ndị a dị oké mkpa ma a bịa n'ịchọpụta njirimara ngwaahịa na Amazon. Ya mere, ana m atụ aro ka ha gụọ ha ugboro abụọ, naanị iji hụ na ihe niile banyere A9 ranking algorithm doro anya.
1. Amazon na-elekwasịkarị anya na nchịkọta RPC kachasị elu (ma ọ bụghị, Nweta Ahịa Ahịa).
2. Amazon na-emechi ihe ọ bụla e mere na ibe ọ bụla nke ikpo okwu, yana otu pịa nke ndị ahịa na-arụ ọrụ na-achọ ngwaahịa ndị dị mkpa n'ebe ahụ.
3. A9 nke Amazon bu n'obi ime ka usoro data a na-agbaso ihe kwekọrọ n'ebumnuche ya kachasị - RPC kacha elu.
Nchịkọta Ndị Isi Nchịkọta Atọ
Ozugbo anyị mechara nweta ihe niile maka A9 algorithm, ọ bụ oge iji nyochaa isi ihe dị mkpa iji chọpụta ọnọdụ ọchichọ onye ọ bụla maka ire ere . E nwere ihe atọ dị oke mkpa nke Amazon, ihe dịka:
Ọnụ ọgụgụ ntụgharị - ụdị a gụnyere ihe niile Amazon chetara dịka ndị nwere mmetụta dị oke ọnụ na ụba ọnụ ọgụgụ nke ntọghata. N'etiti ndị ọzọ, ụdị akụrụngwa ndị a na-atụgharịkarị na ịzụ ọnụahịa, nyocha ndị ahịa, na njirimara ọdịnaya ọdịnaya (ya bụ, ngwaahịa ngwaahịa na nkọwa vidio).
Ntọala - ihe ndị a na-agbanwe agbanwe mgbe nile na mkpokọta ngwaahịa na nkọwa ngwaahịa. Dị ka ọ bụrụ na ọ bụ nzọụkwụ mbụ nke A9 algorithm wepụtara, a ghaghị iwepụta ihe niile dị mkpa ka e wee depụta ya dịka otu okwu ọchụchọ ma ọ bụ arịrịọ nke ogologo-tail.
Afọ ojuju nke ndị ahịa na njide - bụ isi ihe na-eme ka ụzọ RPC kachasị elu na Amazon. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Amazon na-eme ihe kachasị mma iji mee ọtụtụ n'ime ndị ahịa ọ bụla. Ime ka ndị na-azụ ahịa na-enwe obi ụtọ ka ha wee laghachi azụ ugboro ugboro - nke a bụ ihe Amazon na-eme ka ego si. Nke a na-emekarị ihe na-eme ka ndị na-ere ahịa na-ekwu okwu na nke ndị ahịa ODR (ma ọ bụghị, Ụdị Ụdị Ụgwọ).